TRANSCARPATHIAN WINERIES WAXAY KA HELI KARTAA MAALGASHIGA HUNGARY - UKRAINE
Haddii Ukraine ay u ogolaato maalgashadayaasha in ay kiraystaan ​​dhulka iyo shirkadaha, maalgashadayaasha Hungary waxay ku hawlan yihiin dib u soo celinta khamriga Bobovischsky ee Transcarpathia, oo loo yaqaano tayada wax soo saarka, khamriga caanka ah ee ka baxsan dalka. Wadashaqayntu, ganacsatadu waa inay helaan dammaanad qaadista dhammaan qodobada lagama maarmaanka ah ee ka imanaya dhinaca Yukreeniyaan. Waqtigan xaadirka ah, maqaarka khamriga ee warshadda Bobovishchansky ayaa u baahan in la beddelo, tan iyo aaggooda, oo ku leh 2 kiiloomitir, hadda way madhan tahay, taas oo horseedaysa luminta shaqooyinka shaqada. Khamrigu wuxuu ku jiraa foorno foorno, oo bilaabay inuu jabo: Foosto farabadan ayaa dillaacay, iyo biraha ayaa u muuqday in ay ku yaalaan qodobbo ururin bir ah. Kaliya gantaal, oo horay u sameysay shirkada astronauts, waxay u suurtagashay in ay ka fogaato qaddarkaas sababtoo ah cabbirkeedu weyn yahay, oo aan u ogolaanin in laga saaro warshadda. Hungariinta ayaa diyaar u ah inay dib u soo ceshadaan warshadeynta warshadaha maalgashi ku saabsan 5 milyan oo doolar, kaas oo si buuxda u dabooli doona kharashka cusbooneysiinta iyo casriyeynta maqaasiinka khamriga, beerashada beeraha canabka ah iyo rakibidda qalabka ugu dambeeya. Natiijadu waa in la filaa 5 sano, marka dhirta ay awood u yeelan doonto inay faa'iido u hesho.